Dood weyn oo ka dhalatay cunsuriyad lagu sameeyay kooxda Somalia Bandy | Somaliska
Kooxda Somalia Bandy ee ciyaaraha barafka ku ciyaara magaalada Borlänge ayaa isbuucaan laga cayriyay goobtii ay tababarka ku samayn jireen ka dib markii loo sheegay in darisku ay ka soo dacwoodeen. Gabadha lagu magacaabo Cia Embretssen oo ah tababaraha kooxda ayaa warbaahinta u sheegtay in aysan arintu ku saabsanayn dariska oo dhibsaday qaylada dhalinyarada balse ay salka ku hayso cunsuriyad iyo ajaanib naceyb. Goobta laga cayriyay Soomaalida ayaa la sheegay in ay dhalinyarada Swedishka isbuuc kasta ku ciyaaraan oo aysan waligood wax dacwad ah la kulmin.
Ka dib markii ay soo baxday in kooxda Somalia Bandy oo caan ka ah guud ahaan Sweden cunsuriyad lagu sameeyay ayaa waxaa cambaareeyay arintaas qeybaha kala duwan ee bulshada, iyagoo durbadiiba la siiyay goob kale oo ay ku tababartaan. Xitaa ururka guryaha ee HSB ayaa sheegay in ay kooxda ugu deeqayaan 20.000kr.
Balse taageerada ayaan meesha ka saareyn cunsuriyada qarsoon ee ka buuxda Swedish badan oo dhibsanaya soo galootiga iyo horumarkooda. kooxda Somalia Bandy ayaa magacweyn u soo hoysay magaalada Borlänge, iyagoo lagu soo bandhigay filimka caanbaxay ee “Trevligt Folk”. Haddii kooxdaan la cunsuriyeeyay maxaad u malaynaysaa in lagu samaynayo kuwa kale ee aan caanka ahayn?
Arinta ugu dhibka badan ee soo galootigu ay ku qabaan Sweden ayaa ah cunsuriyada daboolan ee loogu soo gambanayo waxyaabo kale, taasi oo ku saamaynaysa markii aad shaqo raadiso, markii aad guri raadsato iyo meelkasta oo aad kula kulanto Swedishka.
waxad tahay webbsite ka kaliah ooo umada somaliyed ayku xiran yahin warkiisa
waxanahay qof aad ugu xiran bologagan adna waxad yara mooda inadan warka iyo waxyalaha dhaca aan horay usoodhigin arimaha dhaman kusabsan qoxootiga iyo
swedenba,waad soo tabisaa war wanadku mahadsantahay lakin waxad modaa inuu
wararkaagu gababsi yahay marka hadad awoodo walal bal dhankaas waxkabadal
July 10, 2015 at 18:01
Samsam walaal waa ku mahadsantahay talada iyo fikrada. Xoogaa Ramadan iyo July ayaa lagu jira marka xoogaa hoos ayaan u dhigay shaqada bogga balse insha Allah bisha August wixii ka dambeeya waa soo kordhin doonaa wararka.
waano ayay utahay soomaalida,fariinta ay gudbinaysaana waa dalkaaga dhiso laguma doonayee lkn ogoow dadka sweden oo dhan maaha cunsuriyiin,qaarbaa doonaya inaan wada noolaano
dadkan intooda badan waa cunsuriyiin lkin wey qarin jireen hadase qarintiiba wey soo dhaafeen
masha allllh nice wa wax loo baahna in laga hadlo aad ban ugu riyaaaqay
Waa wax laga xumaado in koox magac iyo sharafbadan ukeentay wadankaan Sweden in loola dhaqmo si aan u qalmin .. hadii kooxdaan caalamiga ah sidaan loola dhaqmay sidee noqoneysaa dadka masaakiinta ah ee wadanka kucusub ee luqada aqoon Waa kadaran !! sharaf waxaad kuleedahay dhulkaade hooyo..lawaa meel kuu dhaanto wadankaan ilaahoow nabad iyo amni iyo barwaaqo wadankeena nagusii… yurub iyo carab iyo Afrika Asiana kadaran…